ပုဇွန်ထုတ်ကြော် | Wutyee Food House
« ကြက်သား ထမင်း
October 3, 2010 by chowutyee ပုဇွန်ထုတ်ကြော်
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 20 Comments	20 Responses
on October 3, 2010 at 7:02 am | Reply zar
I am going to try….. Thank you for your post.
on October 3, 2010 at 7:31 am | Reply chowutyee
zar ရေ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. တကယ်စားလို့ အရမ်းကောင်းတယ်..😛
on October 3, 2010 at 12:43 pm | Reply lyk
စားကောင်းမယ့်ပုံပဲ .. ပုဇွန်ထုတ်၇တဲ့အချိန်လုပ်စားကြည့်မယ် ..
on October 4, 2010 at 9:55 am | Reply chowutyee
on October 3, 2010 at 5:05 pm | Reply steve
amazing! I would try soon
on October 4, 2010 at 10:11 am | Reply chowutyee
on October 3, 2010 at 9:20 pm | Reply cho
wow i really love that one…ko gyi feed me before😉 will try too
on October 4, 2010 at 10:13 am | Reply chowutyee
ကိုကြီး ကျွေးခဲ့တာ သတိရလို့ လုပ်စားဖြစ်သွားတာ…🙂
on October 4, 2010 at 3:49 am | Reply အိပ်မက်ရှင်
မြင်တာနဲ့ စားချင့်စဖွယ်ပါပဲဗျာ … လုပ်စားကြည့်ပါဦးမယ် အမဝတ်ရည်ရေ … ။
on October 4, 2010 at 10:19 am | Reply chowutyee
on October 4, 2010 at 8:56 am | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဟယ် တကယ့်ကို စားချင်စဖွယ်ဘဲ
ဟိဟိ အရည်တစ်ခုခုသာပါလို့ကတော့ ရှယ်ဘဲ
on October 5, 2010 at 2:15 pm | Reply chowutyee
Thanks par Ma Chaw!!🙂
on October 4, 2010 at 5:12 pm | Reply ဆောင်း
on October 5, 2010 at 2:20 pm | Reply chowutyee
ဆောင်း ဘာမေးစရာ ရှိလို့လဲ…🙂
on October 6, 2010 at 1:52 am | Reply kchel
မေးစရာ မရှိပေမဲ့ ပြောစရာ လေးရှိလို့ ပါ
on October 6, 2010 at 1:54 am | Reply kchel
မေးစရာ မရှိပါဘူး ပြောစရာလေး ရှိလို့ 
ဆောရီး သူငယ်ချင်းအကောင့်နဲ့ ဝင်မိတယ် သူငယ်ချင်း ကွန်ပျူတာ ခနသုံးနေလို့ ကိုယ့်အကောင့်ပြန်မ၀င်တော့ ဘဲ ဆက်ရေးလိုက်မယ်
on October 6, 2010 at 3:22 am | Reply chowutyee
ဆောင်းရေ ဂျီးမေးကနေ စာပို့ထားတယ်နော်..🙂
on October 6, 2010 at 2:04 pm | Reply ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)
ပဇွန်တုပ်ကြော်လေးကို ကော်ဖီလေး ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ မြည်းဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။း))
ဟုတ်ပနော်.. တော်တော်လိုက်ဖက်မှာ.. Thanks naw
on October 13, 2016 at 4:58 am | Reply May Phyo